यी हुन् संसारकै धनी जुवाडे हेर्नुस त , जस्ले युवतीलाई पनि…. - Aajako Nepali Khabar
यी हुन् संसारकै धनी जुवाडे हेर्नुस त , जस्ले युवतीलाई पनि….
यो पनि पढ्नुहोस् : कसरी धनी हुने ??
रत्न खनिज तथा प्राकृतिक पदार्थ हो । यसमा त्यस्ता केही गुण हुन्छन्, जो मानविय जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिनेछ । ज्योतिषिय मान्यता अनुसार यी रत्न नौ ग्रहको किरणको संवाहक हुन्छ ।
यसले खास एक ग्रहको किरण अवशोषित गर्छ । त्यसैले ग्रह–दोषबाट मुक्त हुनका लागि आफ्नो राशी अनुरुप रत्न धारण गरिएको छ ।
ज्योतिष शास्त्रमा प्रत्येक ग्रहको छुट्टाछुट्टै रत्न रहेका छन् र यदि हाम्रो कुनै ग्रह कमजोर छ भने त्यसलाई बलियो बनाउनका लागि रत्न धारण गर्ने परम्परा रहेको छ ।
रत्न धारण गर्दा आफ्नो कुण्डली राम्रो ज्योतिषीलाई देखाएर रत्न सम्बन्धि परामर्श लिएर धारण गर्दा त्यसले अझ राम्रो फल दिन सक्छ ।
ब#’न्दुक र लग्जरी गाडीका शौखिन छन्, उनी । उनीसँग एकसे एक महँगा तथा शानदार ब’#न्दुक छन् । उनी युवतीहरू फेर्नमा पनि माहिर छन् । सोही कारण उनलाई प्लेब्वाई पनि भनिन्छ ।
दुःखको कुरा ३९ वर्षका ड्यान बिल्जेरियन ड्र’ #‘ग्सको कुलतमा फसेका छन् । ३० वर्षको छँदा उनलाई हृ#’दय’घा’त भएको थियो । १२ घण्टाभित्र उनलाई २–३ पटक हृ’दयघा’त भएको थियो । त्यतिबेला उनको ज्या’न मुस्किलले जोगिएको थियो ।